I-Farmer's Cottage - I-Airbnb
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguKuba
Kude nesixeko esikhulu, i-"Farmer's Cottage" yethu ibekwe kwibala elinomtsalane kumda wogcino lwehlathi "Wiejkowski las". Apha unokufumana uxolo olupheleleyo kunye nendalo ecocekileyo! Ukuhambahamba ehlathini, ukudlula imigxobhozo kunye namachibi amaninzi, ukuphumla ufunda incwadi ngaseziko okanye uhambo oluya kuLwandle lweBaltic olukufuphi? Konke oku kunye nokunye okuninzi onokuthi ulindele apha!
I-cottage ebonelelwe ngokwenyani kwisitayile sefama ibonelela ngamagumbi amabini atofotofo, igumbi lokuhlambela labucala elineshawa kunye nebhafu kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Ngenxa yebhedi ephindwe kabini, iibhedi ezimbini zomntu omnye kwigumbi elincinci eliphezulu kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala, le ndlu ithatha i-max. 5 abantu.
Indawo yomlilo entle inika ubushushu obupholileyo kwigumbi. Iinkuni zalo zifumaneka kakhulu kwaye ixabiso libandakanyiwe. Yonke enye into enje nge-cutlery, umenzi wekofu, iitawuli kunye nelinen yebhedi ziyafumaneka kwaye zibandakanyiwe kwixabiso.
4.83 · Izimvo eziyi-145
Ngaphakathi efama akukho nto ngaphandle kwendalo! Kwifama ngokwayo kukho izindlu zangasese ezintathu kunye nendlu yeendwendwe enkulu enamagumbi abantu ngabanye, zonke zinokubhukishwa ngo-Airbnb.
Nangona kunjalo, iikhabhinethi kunye nendlu yeendwendwe zakhiwe kumgama omde omnye komnye, ukuze ukonwabele ubumfihlo bakho ngokupheleleyo!
Umbuki zindwendwe ngu- Kuba
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuzama ukuphendula yonke imibuzo yakho ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko. Ngokusisiseko, kuhlala kukho umntu okhoyo efama onokukunceda.
Sizimisele ukukucebisa malunga namathuba okuzonwabisa kwindawo engqongileyo.
Phantsi kwenombolo yefowuni enikelwe ku-Airbnb ndiya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo ukuba andifanele ndibekho (ndithetha isiPolish, isiJamani nesiNgesi).
Ukuthatha indawo kwisikhululo seenqwelomoya okanye kwisikhululo sikaloliwe akuyongxaki.
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuzama ukuphendula yonke imibuzo yakho ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko. Ngokusisiseko, kuhlala kukho umntu okhoyo efama onokukunceda…